iXledger စျေး - အွန်လိုင်း IXT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို iXledger (IXT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ iXledger (IXT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ iXledger ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $207 131.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ iXledger တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
iXledger များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
iXledgerIXT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00313iXledgerIXT သို့ ယူရိုEUR€0.00265iXledgerIXT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00239iXledgerIXT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00285iXledgerIXT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0283iXledgerIXT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0198iXledgerIXT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0698iXledgerIXT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0117iXledgerIXT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00418iXledgerIXT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00437iXledgerIXT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.07iXledgerIXT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0242iXledgerIXT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.017iXledgerIXT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.235iXledgerIXT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.525iXledgerIXT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00429iXledgerIXT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00473iXledgerIXT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0976iXledgerIXT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0218iXledgerIXT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.331iXledgerIXT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.72iXledgerIXT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.18iXledgerIXT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.23iXledgerIXT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0864
iXledgerIXT သို့ BitcoinBTC0.0000003 iXledgerIXT သို့ EthereumETH0.000008 iXledgerIXT သို့ LitecoinLTC0.00005 iXledgerIXT သို့ DigitalCashDASH0.00003 iXledgerIXT သို့ MoneroXMR0.00003 iXledgerIXT သို့ NxtNXT0.231 iXledgerIXT သို့ Ethereum ClassicETC0.000448 iXledgerIXT သို့ DogecoinDOGE0.901 iXledgerIXT သို့ ZCashZEC0.00003 iXledgerIXT သို့ BitsharesBTS0.123 iXledgerIXT သို့ DigiByteDGB0.116 iXledgerIXT သို့ RippleXRP0.0107 iXledgerIXT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000107 iXledgerIXT သို့ PeerCoinPPC0.0107 iXledgerIXT သို့ CraigsCoinCRAIG1.42 iXledgerIXT သို့ BitstakeXBS0.133 iXledgerIXT သို့ PayCoinXPY0.0544 iXledgerIXT သို့ ProsperCoinPRC0.391 iXledgerIXT သို့ YbCoinYBC0.000002 iXledgerIXT သို့ DarkKushDANK1 iXledgerIXT သို့ GiveCoinGIVE6.75 iXledgerIXT သို့ KoboCoinKOBO0.727 iXledgerIXT သို့ DarkTokenDT0.00288 iXledgerIXT သို့ CETUS CoinCETI9